भोली जनै पुर्णिमा-यस्तो छ जनैको वैज्ञानिक महत्त्व – Sawal Nepal ||The Power of Information
भोली जनै पुर्णिमा-यस्तो छ जनैको वैज्ञानिक महत्त्व
सवाल नेपाल २०७६ श्रावण २९, बुधबार १२:१८ मा प्रकासित
काठमाडौं – भोलि बिहीवार जनै पूर्णिमा परेको छ । यस दिनमा व्रतबन्ध गरेका द्विजातिहरूले जनै फेर्ने गर्छन् । सनातन हिन्दू धर्मका १६ संस्कारमा उपनयन संस्कार अन्तर्गत जनै लगाउने गरिन्छ । यसलाई यज्ञोपवीत संस्कार भनिन्छ ।
जनै लगाउने पवित्र मन्त्र यसप्रकार छ : ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेयर्त्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ जनैलाई उपवीत, यज्ञसूत्र, ब्रह्मसूत्र लगायतका नामले पनि चिनिन्छ । जनै धारण गर्ने परम्परा वैदिक कालदेखि चलिआएको छ ।
उपनयन संस्कार भएका व्यक्तिले जनै लगाउँछन् । उपनयनको अर्थ हुन्छ नजिक लानु । कसको नजिक लाने त ? ब्रह्म (ईश्वर) र ज्ञान नजिक । जनै धारणको धार्मिक र वैज्ञानिक महत्त्व छ ।
धार्मिक महत्त्वको कुरा गर्दा द्विज बालकले जनै लगाएपछि नै यज्ञ तथा स्वाध्याय गर्ने अधिकार पाउँछ । द्विजको अर्थ हुन्छ अर्को जन्म । जनै तीनवटा पवित्र सूत्रबाट बन्छ । यसलाई देब्रे काँधमाथि तथा दाहिने हातमुनि लगाइन्छ ।
तीन सूत्रले ब्रह्मा, विष्णु र महेशलाई प्रतीक बनाएका छन् । देवऋण, पितृऋण र ऋषिऋण अनि सत्त्व, रज र तमको प्रतीक पनि यसलाई मानिन्छ । यी तीन सूत्रहरू गायत्री मन्त्रका तीन चरणको र तीन आश्रमको पनि प्रतीक हो ।
जनैको लम्बाइ ९६ औंला हुन्छ किनकि जनै धारण गर्ने व्यक्तिले ६४ कला र ३२ विद्या सिक्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । बत्तीस विद्या चार वेद, चार उपवेद, ६ अंग, ६ दर्शन, तीन सूत्रग्रन्थ र नौ अरण्यक मिलेर बन्छन् । चौसट्ठी कलामा वास्तु निर्माण, व्यञ्जनकला, चित्रकारिता, यन्त्र निर्माण लगायत पर्छन् । लोकान्तरअनलाइनले लेखेको छ ।
जनै धारणका नियम
मलमूत्र विसर्जन गर्दा जनै दाहिने कानमा बेर्नुपर्छ र हात सफा गरेपछि मात्र निकाल्नुपर्छ । जनैलाई कम्मरमाथि राख्नुपर्छ र अपवित्र हुन दिनुहुँदैन ।
जनैको एक सूत्र चुँडियो वा जनै लगाएको ६ महिनाभन्दा बढी समय भयो भने बदल्नुपर्छ । चुँडिएको जनै शरीरमा धारण गर्नुहुँदैन । जनै मैलिन थाल्नुअघि नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
घरमा जन्म वा मरणको सूतकपछि जनै बदल्ने परम्परा छ ।
जनै सफा गर्दा शरीरबाट निकालेर बाहिर राख्नुहुँदैन । सफा गर्नका लागि घाँटीमा नै त्यसलाई राखेर घुमाउँदै धुनुपर्छ । झुक्किएर जनै शरीरबाट निस्कियो भने प्रायश्चित्तका लागि एक माला जप गरेर बदल्ने नियम छ ।
जनैको वैज्ञानिक महत्त्व
बारम्बार दुःस्वप्न आइरहेको छ भने जनै धारण गर्दा त्यस्तो सपना आउँदैन ।
जनै लगाउने व्यक्ति सफाइको नियममा बाँधिएको हुन्छ । सफाइले उसको दाँत, मुख, पेट लगायतका रोगबाट बचाउँछ ।
जनैलाई दाहिने कानमा बेर्दा कानको नसा थिचिन्छ अनि मस्तिष्कको सुतेको तन्तुले काम गर्छ ।
दाहिने कानको नसा अण्डकोष र गुप्तेन्द्रियसँग जोडिएको हुन्छ । मूत्र विसर्जन गर्दा दाहिने कानमा जनै बेर्दा शुक्राणुबाट रक्षा हुन्छ ।
कानमा जनै बेर्दा सूर्य नाडी जागृत हुन्छ ।
कानमा जनै बेर्दा पेट सम्बन्धी रोग र रक्तचापको समस्या हट्छ ।
कलिला विद्यार्थीमाथि प्रहरीको निर्घात लाठी चार्ज
बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फायल रोकियो ! नक्कली मोही खडा गरेर भएको कर्तुत लुकाउने प्रयास
दमकमा नाम सहकारी काम मनपरी, ठुला भन्ने सहकारीमा पनि बचतकर्ताको रकममा रजाइ